म को हुँ? पीटी. 2: अपनाए — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
हाल म स्टीव रोजगार को एक जीवनी पढ्न, संस्थापक र दूरदर्शी एप्पल पछि, संसारमा सबै भन्दा ठूलो कम्पनी. उहाँले एक प्रतिभा र एकै समयमा एक पागल व्यक्ति थियो किनभने यो पढ्न साँच्चै रोचक थियो. सुरुदेखि अन्तसम्म आफ्नो जीवन साँच्चै रोचक थियो.
आफ्नो जीवन थाले एक पुरुष र महिला भेट्दा, तिनीहरूले विवाह अघि एक बच्चा थियो, र ग्रहण लागि तिनलाई दिए. यो वास्तवमा उहाँलाई बलियो प्रभाव थियो, किनभने उहाँले सधैं त्यागेर महसुस, र उहाँले पछि आफ्नै छोराछोरीको एक त्यागेर.
तर कथा को रोचक भाग एक प्रकारको र मायालु परिवार क्यालिफोर्निया उहाँलाई अपनाए छ. र तिनीहरूले उहाँलाई साँच्चै उहाँलाई आफ्नै छोरा जस्तै गरे र उपचार. उहाँको पिताजी एक इन्जिनियर थियो र उहाँलाई राम्ररी तैयार कुराहरू लागि एक मूल्यांकन दिनुभयो. र आफ्नो आमाबाबु त्यसलाई सफल हुन हरेक मौका दिन ठूलो त्याग गर्नुभयो.
अब आफ्नो सफलता को एक विशाल भाग उहाँलाई अपनाए गर्ने मान्छे संग के थियो. तिनीहरूले उहाँलाई आकारको. तिनीहरूले आफ्नो समायोजित पनि बाटो हरेक विधिपूर्वक आफ्नो मनोवृत्ति र उहाँले केहि हुन बनाउन सक्ने विश्वास गर्न योगदान.
ग्रहण बारेमा सुन्दर कुरा कोही कुनै जिम्मेवारी पाएका मानिसहरू जिम्मेवारी लिन निर्णय छ. तिनीहरू एक बच्चा प्रदान गर्न केही छ हेर्न, र तिनीहरूले उहाँलाई तिनीहरूले गरेका प्रस्ताव. बच्चा खाँचोमा परेका छ र तिनीहरूले ती आवश्यकता पूरा गर्न सहमत. तिनीहरूले के गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूले दया बाहिर यो के.
तपाईं र म जस्तै मान्छे को परमेश्वरको ग्रहण थुप्रै तरिकामा यस्तै छ. परमेश्वरले हामीलाई अपनाउनु छैन. परमेश्वरको बाध्य छ. हामीले उहाँलाई प्रदान गर्न केही छ. हामी नितान्त खाँचोमा परेका छन्, र परमेश्वर ती आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ.
तर ठूलो भिन्नता परमेश्वरको अनियमित बच्चाहरु उहाँले पूरा गोद छैन भन्ने छ. परमेश्वरले उहाँलाई चित्त दुखाएका छौं जो विद्रोही गोद छ. परमेश्वरको अपराधीहरूलाई गोद छ. परमेश्वरको सुन्दर तर भाँचिएको पापी गोद छ. त्यहाँ जस्तै कुनै प्रेम छ किनभने त्यहाँ परमेश्वरको जस्तै कुनै ग्रहण हो उहाँको.
का यूहन्ना हेरौं 1:10 सँगै हाम्रो समय सुरु गर्न.
"उहाँले संसारलाई थियो, र दुनिया उहाँमार्फत गरिएको थियो, अहिलेसम्म संसारको उहाँलाई थाह भयो. आफ्नै आए, र आफ्नै मानिसहरूले तिनलाई प्राप्त गरे. तर सबै जो उहाँलाई ग्रहण गरे, जो आफ्नो नाम मा विश्वास, उहाँले परमेश्वरको सन्तान गर्ने अधिकार दिए, जसले जन्म थिए, रगतको छैन न त शरीरका इच्छा को न त मानिसको इच्छा को, परमेश्वरको तर। " (यूहन्ना 1:10-13)
म. उहाँको परिवारमा जन्म
हाम्रो जस्तै देश मा सबै भन्दा साधारण अनुमानको एक सबैको परमेश्वरको बच्चा छ भन्ने छ. तर त्यो छैन बाइबलले के सिकाउँछ छ. बाइबल हामी जन्म हुँदा भनेर सिकाउँछ, हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्न, तर परमेश्वरको शत्रु. र केही पनि थप भयावह बाइबल सिकाउँछ, हामी शैतानको को बच्चाहरु जन्म हुनुहुन्छ कि. यो हामी सीङ छ भन्ने होइन, तर हामी शैतानको निम्न र हाम्रो कार्यहरू थप आफ्नो जस्तै भन्दा परमेश्वरको जस्तो कि गरिरहनु.
अब धेरै मानिसहरू आज हास्यास्पद र असहिष्णु सुनिन्छ भन्नुहुन्छ. "बिल्कुल हामी परमेश्वरको सबै छोराछोरीलाई हुनुहुन्छ,"तिनीहरूले यसो भन्न सक्छौं. खैर, हो, हामी सबै परमेश्वरले त्यस अर्थमा गरे हुनुहुन्छ हामी आफ्नो सन्तानलाई हुनुहुन्छ, तर बाइबल यति अधिक यो परमेश्वरको हुनुको छोराछोरीलाई वार्ता गर्दा अर्थ. यो बच्चाको जैविक पिता हुनुको भिन्नता जस्तै, तर वास्तवमा आफ्नो जीवन मा रहेको छैन, कसैको पिताजी हुनुको तुलना, तिनीहरूलाई मायालु, तिनीहरूलाई संग खेल, र आफ्नो आवश्यकता हेरचाह.
यो आफ्नो परिवारमा जन्मेका छैन जस्तो भइरहेको, जो सामान्यतया स्वतः हुन्छ. त्यहाँ एक परिवर्तन हुन छ, नयाँ जन्म, रूपान्तरण. किनभने आफ्नो आमाबाबुले छन् तपाईं परमेश्वरको छोरा वा छोरी हुनुहुन्छ, वा किनभने आफ्नो मित्र हो, वा हुन चाहनुहुन्छ किनभने.
हामी परमेश्वरको छोरा वा छोरी बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामी आफ्नो परिवारमा अपनाए छ. तर त्यो कसरी हुन्छ?
तपाईं मसीही हुन आफैलाई विचार भने, म तिमी किन आफैलाई सोध्न चाहनुहुन्छ. हरेक अब र फेरि म एक विमान मा हुनेछु, र म तिनीहरू परमेश्वरसित सम्बन्ध छ वा छैन अर्को मलाई मानिसहरूले सोध्नेछौं. र तिनीहरूले सामान्यतया हो भन्न, र म तिनीहरूलाई किन सोध्नेछौं. म के तिनीहरूले आधार तिनीहरूलाई सोध्नेछौं? यो एक डिब्बामा अप हिड्ने छ, वा प्रार्थना दोहरो, वा पद पढेर?
हामीले पढ्ने पद राम्रो स्पष्ट भन्छन्, "सबै जो उहाँलाई ग्रहण गरे, जो आफ्नो नाम मा विश्वास, उहाँले परमेश्वरको सन्तान गर्ने अधिकार दिए…"परमेश्वरको एक बच्चा बनना के तपाईं येशू पाउँदा हुन्छ. अनि तपाईं कसरी येशूको प्राप्त गर्छौं? आफ्नो नाम मा विश्वास गरेर.
त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो बच्चाको रूपमा पृथ्वीमा हरेक एक मानव अपनाउने प्रस्ताव गर्ने यो धनी philanthropist रूपमा कल्पना. अनि उहाँले सोध्छन् मात्र कुरा तपाईं विश्वास आफ्नो छोरा प्राप्त छ. र तपाईं परिवार मा हुनुहुन्छ.
त्यसको मतलब के हो?
अब हामी उनले भन्न गर्दैन नोटिस "आफ्नो शिक्षामा विश्वास." उस्ले भन्यो "आफ्नो नाम मा विश्वास."त्यहाँ एक वास्तविक व्यक्ति मा कसैको शिक्षामा विश्वास र भरोसा बीच एक धेरै ठूलो फरक छ. यूहन्ना प्राप्त येशूले आफ्ना नाम मा व्यक्तिगत-विश्वास भरोसा छ भन्दै छ, र सबै उहाँले हुन प्रकट.
त्यसैले मित्र, म तपाईंलाई भन्न लागि यो पर्याप्त छ भन्ने जान्न चाहन्छु, "म येशूको शिक्षाको केही विश्वास, म हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ विश्वास, म हामी चर्च जानु पर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। "यूहन्ना उहाँलाई आफ्नो नाम मा विश्वास मतलब प्राप्त भन्दै छ! येशूले आफ्नो भरोसा राख्दै. येशूको सबै.
अन्त मा, यो येशूको आउँदा मानिसहरू दुई प्रकारका छन्: किनभने उनीहरू अन्धकारमा प्रेम उहाँलाई तिरस्कार गर्नेहरूलाई र उहाँको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूलाई.
“म हल्का रूपमा संसारमा आएका छन्, अन्धकारमा भनेर जसले मलाई विश्वास रहन सक्छ।” (यूहन्ना 12:46)
साँचो विश्वास भनेको के हो?
कहिलेकाहीं हामी विश्वास येशूको बारेमा केही तथ्य सहमत छ कि लाग्छ. म मलाई लाग्यो के थाहा. तर विश्वास उहाँलाई वास्तवमा भरोसा छ. उहाँले छ जो बारेमा तथ्य थाह छ र उहाँले के गर्नुभएको गर्नुपर्छ, ती तथ्य सहमत, र भरोसा तिनीहरूलाई आफ्नो जीवन तिनीहरूलाई-सट्टेबाजी.
तपाईं यस मा आफ्नो जीवन शर्त छ? तपाईं ख्रीष्टको थाहा टाढा सबै फेंक गर्न इच्छुक छन्?
उहाँले हामीलाई यो परमेश्वरको एक बच्चा हुन अर्थ बारे मा थोडा बताउँछ नोटिस, जन्म लागेकाहरू रूपमा वर्णन ", रगतको छैन न त शरीरका इच्छा को न त मानिसको इच्छा को, परमेश्वरको तर। "
उहाँले हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन जाँदै हुनुहुन्छ भने यसो भन्दै गर्नुपर्छ, हामी पुनर्जन्म छ. त्यो हामी नयाँ बनाएको हुनुहुन्छ अर्थ. हाम्रो पुरानो आत्म मृत्यु. पहिलो पटक हामी जन्म थिए हामी सही, त्यसैले हामी फेरि सबै जन्मन आवश्यक.
यूहन्ना हामीलाई यस जन्म हाम्रो पहिलो भन्दा फरक छ भनेर थाहा गर्न चाहन्छ. उहाँले हामी बुझ्न निश्चित गर्न धेरै क्वालिफायर दिन्छ. "रगतको छैन" -he यो प्राकृतिक वंश वा वंश गर्न केही छ भनेर थाहा चाहनुहुन्छ. "छैन शरीरका" -he हामीलाई थाहा छ मानव यौन इच्छा संग Originate थिएन चाहन्छ. "न त मानिसको इच्छा को" -he हामीलाई यस जन्म मानिस द्वारा सुरु भएको थिएन जान्न चाहनुहुन्छ. यो नयाँ जन्म परमेश्वरको छ!
फेरि मान्छे संग आए त्यो केवल वाक्यांश छैन जन्म. यो ख्रीष्टमा भरोसा गरेका ती लागि एक वास्तविकता हो. र यो सबै परिवर्तन गर्ने एक वास्तविकता हो. परमेश्वरले तपाईंलाई नयाँ हृदय दिन्छ, रूपमा उहाँलाई हेर्न साथै, र आफ्नो आत्मा तपाईंलाई बास. तपाईं एक ब्रान्ड नयाँ सृष्टि हो.
तपाईं पाप विगतमा प्राप्त गर्न सक्षम हुन कहिल्यै पनि भन्ने धारणा एक खराब धारणा छ. तपाईं परमेश्वरको परिवारमा पुनर्जन्म एउटा नयाँ सृष्टि हो.
केही नयाँ देखा परेको छ. तपाईं अब उप्रान्त अरू सबैलाई मन हुनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई जस्तै हुन प्रयास रोक्न. तपाईं नयाँ लक्ष्य संग एक नयाँ टोली सामेल भएका. हामी पनि नयाँ जन्म संग महसुस गर्न, हामी एक परिवारमा अपनाए गरिएको छ. त्यसैले तपाईंले परिवारको सदस्यको छ, विश्वासमा भाइबहिनीहरू. तिनीहरुलाई माया गर. तिनीहरूलाई प्रोत्साहन. हामी यहाँ एक अर्को येशूको पछि मदत गर्न हुनुहुन्छ.
द्वितीय. उहाँको पुत्र जस्तै व्यवहार
जब एक परिवार कसैले adopts, तिनीहरूले तिनीहरू अपनाए बच्चा जस्तो कि अपनाए बच्चा महसुस गर्दैन बनाउन ठूलो लम्बाईहरू जाने. तिनीहरूले फरक र अप्ठ्यारो महसुस गर्न चाहँदैनन् वा हौं छैन रुचि. बरु तिनीहरूले अन्य छोराछोरी जस्तै व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ. यस्तै मा, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो छोरा र छोरी रूपमा adopts गर्दा, उहाँले हामीलाई आफ्नो एक मात्र छोरा जस्तै व्यवहार, येशूले.
के तपाईंले कहिल्यै कसैलाई भरोसा कोष बच्चा कुरा सुनेको छु? यो कोही जसको आमाबाबुले धनी हो, र बस तथ्यलाई द्वारा तिनीहरूले जन्म थिए, तिनीहरू पनि धनी अब हुनुहुन्छ. मान्छे तिनीहरूलाई बाटपुनपठाइएको त्यसैले, किनभने अरू थियो सबैलाई तिनीहरूले कुराहरू लागि कडा परिश्रम गर्न. शायद उनीहरू र आफ्नो सुखसुविधा आनन्द, तर तिनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन काम थियो. अर्कोतर्फ, यो धनी बच्चा आफ्नो जीवनमा एक दिन काम थियो कहिल्यै तर उहाँले अरू सबैलाई भन्दा राम्रो गरिरहेको गर्नुपर्छ. उहाँले काम कुनै पनि गरिरहेको बिना सबै लाभ छ.
आध्यात्मिक कुरा, हामी भरोसा कोष बच्चाहरु छन्. बस तथ्यलाई प्रकृति हामी परमेश्वरको परिवारमा पुनर्जन्म गरिएको गर्नुभएको, हामी आध्यात्मिक धन प्राप्त. हामी आफ्नो व्यवस्था विपरीत बस्ने, र हामीले उहाँलाई आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभएको, तर हामी ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास गर्दा हामी सबै लाभ येशूले प्राप्त प्राप्त. येशूको काम पूरा सबै हामीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ.
गरेको ती कुराहरू केही कुरा गरौं.
"हाम्रो खातिर तिनले कुनै पाप थियो जसले पाप हुन गरे, त्यसैले हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सक्छ। " (2 कोरिन्थी 5:21)
येशूले हामीलाई स्थानहरु सरेका. उहाँले हामीलाई जस्तो व्यवहार थियो, र हामीले उहाँलाई जस्तै व्यवहार प्राप्त. कि अचम्मको छ? जब तपाईं परमेश्वरले अपनाए हुनुहुन्छ, तपाईं बस-छैन उसलाई एक फोहोर रूपमा धर्मी देखेको हुनुहुन्छ, व्यर्थका पापी, तर रूपमा धार्मिक.
कसैले परीक्षण परिणाम बाहिर सरेका जस्तो छ. हामी एक प्राप्त + तापनि हामी असफल, र येशूले असफल लागि दण्ड पीडित.
म वचन म हुनुपर्छ बाटो भएको हुँदा म कहिले काँही थाहा, वा म अरूसित सुसमाचारको साझेदारी छैन जब गरिएको जस्तै म हुनुपर्छ, म परमेश्वरको जस्तै महसुस गर्न सुरु मलाई पागल छ. अनि त्यसपछि मलाई प्रार्थना देखि राख्छ, म उहाँले मलाई सुन्न चाहनुहुन्छ गर्दैन जस्तै महसुस किनभने. ती समयमा उहाँले मलाई अपनाए जब कि सम्झना गर्न उपयोगी छ, उहाँले मलाई येशूको धार्मिकता दिनुभयो.
त्यसैले त्यो अब मलाई रिसाएको छ; उहाँले ख्रीष्टमा मलाई खुसी गर्नुपर्छ. मेरो पाप उहाँलाई शोकित, तर आफ्नो परिवार मा मेरो ठाउँ कहिल्यै परिवर्तन. म यसलाई त्यहाँ प्राप्त गर्न लिन्छ के गरेनन्, र म मलाई हटाउने गर्न सक्नुहुन्छ केही त्यहाँ. म सिर्फ भरोसा र repenting राख्न आवश्यक.
यो पनि अन्य मानिसहरू सबै समय खुसी पार्न प्रयास को दासत्वबाट मलाई मुक्त. म साँच्चै सबैलाई मेरो अत्यधिक सोच्न चाहने सङ्घर्ष. र सबै भन्दा मलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो अनुमोदन आवश्यक छैन भनेर सम्झना छ, म पहिले नै परमेश्वरको छ किनभने. म उसलाई राम्रो स्थितिमा पहिले नै छु. म कहिल्यै आवश्यक सबै अनुमोदन
यसले अन्य मानिसहरूलाई के लाग्छ आधारित आफ्नो जीवन बिताउन जेलमा छ. परमेश्वरको ख्रीष्टमा तपाईं को अत्यधिक सोच्छ, भनेर पर्याप्त होस्. के तपाईं कहिल्यै आवश्यक सबै अनुमोदन.
हामी अनन्त मृत्यु कमाएको छु, तर ख्रीष्टमा हामी परमेश्वरसित सधैंभरि बाँच्न प्राप्त. हामी प्रशस्त यो बस्थे गर्न चाहनुभएको थियो जीवन-जीवन प्राप्त. हामी सधैंभरि राजा को सिद्ध उपासना बस्ने प्राप्त.
यो जीवन हामी सबै छैन. हामी किन जस्तो बाँच्न गर्छन्? हामी अब रमाइलो कुराहरूबाट पछि सदाको र पीछा लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू बेवास्ता. तर किन? यो हामी प्राप्त सबै भन्दा राम्रो छैन. हामी स्वर्गमा उसलाई नहुँदासम्म यो परमेश्वरको महिमा गर्न यस पृथ्वीमा हामी समय छ.
हामी यो हामी प्राप्त सबै छ लाग्छ जब हामी बस आफैलाई रमाइलो गर्न हामी गर्न सक्छन् सबै के गर्न छ. तर हामीलाई थाहा छ जब यो केवल पूर्वावलोकन हामी हाम्रो सदाको लगानी हाम्रो समय खर्च गर्न सक्छन् छ.
3. बुबाले प्रेम & हेरविचार
म असाध्यै मेरो छोरा प्रेम. र म उहाँको लागि केही गर्न हुनेछ. परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो लागि राम्रो भन्ने बिल्कुल केहि दिन हुनेछ. तपाईं अहिले छैन कुरा भने त सम्झना, यसलाई परमेश्वरले दिन सक्षम छैन किनभने छैन. यो तपाईं को लागि राम्रो छैन किनभने यो हो.
हामी परमेश्वरको साँचो छोराहरू रूपमा व्यवहार गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई थप प्रमाण हामी उहाँको प्रेम देखि कहिल्यै अलग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई छ. हामीले येशूलाई एकताबद्ध भए, र येशूले हामीलाई पिता ल्याइएको. हामी येशूमा हामी परमेश्वरको कहिल्यै अलग गर्न सक्छन् किनभने हुन.
प्रश्न: अतः परमेश्वरको छोराछोरी उहाँलाई अलग गर्न सक्छ? उत्तर: कुनै एक उहाँको प्रेम देखि परमेश्वरको छोराछोरी अलग गर्न सक्छ.
"म निश्चित छु कि न मृत्युले, न जीवनले, न त स्वर्गदूतहरू न शासक, न त वर्तमान कुराहरू न त कुराहरू आउन, न त शक्ति, न त उचाइ न त गहिराई, न त सबै सृष्टिमा केहि, हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्षम हुनेछ। " (रोमी 8:38-39)
त्यहाँ ख्रीष्टमा परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने रचना सबै केही छ. हामी आफ्नो छोरा र छोरी छन्.
तपाईं एक बच्चा छँदा, के तपाईं कहिल्यै कसैले तपाईंलाई केहि दिन थियो, त्यसपछि यसलाई लिन प्रयास? यो के गर्न प्रयोग मलाई मेरी बहिनी. उनले साँच्चै रुचि थिएन भन्ने कुरा हुनेछ, र त्यसपछि त्यो यो मलाई दिनुहुन्छ. यो उनको लागि रद्दीटोकरीमा थियो. त्यसैले म यो प्राप्त चाहन्छु, यसमा मेरो नाम लेख्न, यसलाई-यो आनन्द मेरो हो. खैर अब म साँच्चै यो आनंद छु म यो छ कि, र अब त्यो मलाई यो आनंद हेर्छ र त्यो फेरि चाहन्छ. हा? खैर म यसलाई कुनै पनि विशेष संलग्न छैन अघि जबकि, अब म के. मेरो हो. म यसलाई मेरो नाम लेखे र यसलाई खेल्न मजा तरिका बाहिर समझ. यसले परमेश्वरसितको जस्तै. हामी आफ्नो हुनुहुन्छ कि, उहाँले हामीलाई दाबी. उस्ले भन्यो, "मेरो!"कुनै एक हामीलाई टाढा उहाँलाई र उहाँको प्रेम देखि खोसी.
हामी कठिन समयमा मार्फत जब यो सम्झना छ. हाम्रो कठिन समयमा कुनै पनि परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्छ. वास्तवमा, कहिलेकाहीं ती कठिन समयमा तथ्यलाई प्रमाण हो हामी परमेश्वरको छोराछोरी छन् कि.
परमेश्वरको बस हामीलाई सामान दिंदैन, तर उहाँले हामीलाई आफूलाई दिन्छ. जब हामी उसलाई छोड्न यौन पूरा गरेपछि जाँदै, हामी एक नक्कली को खोज मा वास्तविक कुरा छोडेर हुनुहुन्छ. तपाईं परमेश्वरको साथ पूरा गर्न र उहाँको वचन हरेक दिन उहाँलाई सुन्न सक्नुहुन्छ. उहाँले आफ्नो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई जवाफ हुनेछ. तपाईं उसलाई नजिक यदि तपाईं आफूले नजिक हुनेछ.
III. उहाँको छोरा अनुरूप चल्दा
उहाँले हामीलाई छोडेर छैन हामी कहाँ हो. उहाँले हामीलाई थप उहाँलाई जस्तै बनाउँछ. त्यसैले मात्र येशूलाई जस्तै हामीलाई व्यवहार, तर उहाँले हामीलाई येशू जस्तै बनाउँछ.
हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भइरहेको र भङ्ग बारेमा कुरा. खैर येशूले परमेश्वरको सिद्ध छवि छ, र परमेश्वरले येशूलाई जस्तै हामीलाई गरेर आफ्नै छवि हामीलाई अनुरूप. हामी परिवारमा हुनुहुन्छ जस्तो गर्न सुरु.
हामी सबै छोडेर येशू सबै शर्त गर्न इच्छुक छ कि विश्वासको प्रकारको बारेमा कुरा. जब परमेश्वरले हामीलाई adopts, उहाँले हामीलाई छोडेर छैन हामी कहाँ हो.
म येशूमा विश्वास बारेमा अन्य दिन केही विद्यार्थीहरूले कुरा थियो, र एक व्यक्ति भने, "मलाई विश्वास छ, तर म अझै पनि कहिलेकाहीं रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ. त्यो हो म मसीहीहरूले वरिपरि रहेको जस्तै सधैं के किन। "त्यहाँ व्यक्ति मानन छ कि केही कुराहरू हुन सक्छ, तर विश्वास लागि बाइबल कल छ को प्रकारको तपाईं सबै छ. यो तपाईं आफ्नो पाप हेर्न बाटो परिवर्तन. तपाईंले यसलाई देखि बारी.
पावल यसो भन्छन् के सुन्न:
"तपाईं कि अधर्मी परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन् थाह छ? के छल्न छैन; न यौन अनैतिक, न त मूर्तिपूजकहरूलाई, न त adulterers, मानिसहरू न त समलिङ्गीहरूले अभ्यास गर्ने, न त चोर, न त लोभी, न त drunkards, न त revilers, न त ठगाहाहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछ. र तपाईँले केही थिए. तर तपाईं धोए थिए, तपाईं पवित्र थिए, तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा र हाम्रो परमेश्वरको आत्मा द्वारा जायज थिए। " (1 कोरिन्थी 6:9-11)
ती कुराहरू छन् भुत काल. हामी अब ती कुराहरू द्वारा परिभाषित गरिरहनु भएको छैन.
तपाईं के उनको अभिभावक बताउन बच्चा देखे भने तपाईं के थियो? एक घर वरिपरि Crawling उनको आमाबाबुले वरिपरि आदेश? तपाईं त्यो पागल थियो लाग्छ थियो! किन? किनभने तिनीहरू आमाबाबुले छन्, तर तिनीहरूले बच्चा जस्तै अभिनय गर्दै. It's मान्छे केही शक्ति र विशेषाधिकार छ तर तिनीहरूलाई हिंड्न इन्कार गर्दा दुःखी. यो एक मसीही पाप बस्न को लागि पनि crazier छ. तपाईं पाप भन्दा शक्ति छ र तपाईं स्वतन्त्रता हिंड्न सुअवसरको दिइएको गर्नुभएको. तपाईं शक्ति किन बेवास्ता र दासत्व हिंड्न थियो?
मसीहीहरूको हैसियतमा, परमेश्वरको पहिले नै हामीलाई पवित्र बनाएको छ. अब हामी हरेक दिन ख्रीष्टको भएका प्रतिबिम्बित गर्न हाम्रो जीवन बनाउन प्रयास गर्दै. तपाईं ख्रीष्टमा छन् भने तपाईं झूटो हो. तपाईं एक समलिङ्गी छैनन्. तपाईं चोर छैनन्. तपाईं एक सेन्ट छन्. सामान अब तिमी माथि कुनै शक्ति छ.
म के आज यहाँ संग संघर्ष गर्दै छन् थाहा छैन, तर यो तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने एक स्थिति परिवर्तन भएको छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण. म पापको एक भयानक चक्र मा समातियो जब म मेरो मसीही जीवनमा सिजन सम्झना. र म मेरो पाप दासत्वमा भएको जस्तो लाग्यो. र मेरो वृद्धिको ठूलो अंश यो सत्य बुझ्दा थियो: म पाप छैन भनेर. म विगतका दासत्वबाट मुक्त गरिएको छ
के परमेश्वरको बारेमा सबैभन्दा फिक्री गर्नुहुन्छ
मुख्य कुरा परमेश्वरले आफ्नो जीवन मा गरिरहेको छ तपाईं पवित्र बनाउने छ. उहाँले आफ्नो सान्त्वना चिन्तित छ भन्दा, उहाँले आफ्नो पवित्रता बारे चिन्तित छ. हिब्रू मा 12, लेखकले हाम्रो जीवनमा अनुशासन वार्ता. कहिलेकाहीं जीवन चोट हुनेछ. तर यो हामी कठिन समयमा मार्फत जब कि स्पष्ट छ, यो होइन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्दैन. वास्तवमा उहाँले हामीलाई कठिन समय दिएर प्रेम. यो शब्द अनुशासन मूलतः प्रयोग भएको प्रशिक्षण अर्थ. परमेश्वरले हामीलाई प्रशिक्षण र थप येशूले जस्तै हामीलाई गरिरहेको छ. उहाँले हामीलाई पवित्र गरिरहेको छ.
यसले परमेश्वरको unloving हुनेछ हामीलाई प्रशिक्षण छैन र हामीलाई थप पवित्र बनाउन. यो हामी आफ्नो छोरा हुनुहुन्न भनेर अर्थ राख्छ. कहिलेकाहीं उहाँले पनि किनभने पापको हाम्रो बाटो अनुशासन फेंकता. जब तपाईं पाप, र भयानक परिणाम हो, कि जस्तै मात्र संयोग लिने छैन. तपाईं परमेश्वरलाई अनुशासन छ विचार गर्नुपर्छ. उहाँले पाप ल्याउँछ के देखाउने छ, र उहाँले तपाईं थप ख्रीष्टको जस्तै बनाउन आकार दिन छ. हामी scrawny छन् जस्तो छ, र परीक्षा हामीलाई शौकीन बनाउन. येशू सिद्ध आध्यात्मिक buffness छ, र परमेश्वरले उहाँलाई जस्तै हामीलाई बनाउन चाहन्छ.
अन्ततः यो परमेश्वरको काम हो. उहाँले हाम्रो प्रयास को माध्यम गर्छ, तर तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले र यो गर्नेछु गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले अचाक्ली आफैलाई निरुत्साहित छैन. जस्तै तपाईं आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन तपाईं महसुस हुन सक्छ, र त्यो सत्य हो. जहाँ परमेश्वरको उहाँले तपाईंलाई परिवर्तन हुनेछ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ठाउँहरू जाने.
तपाईं मसीही हुनुहुन्छ भने, जसले तपाईं र के परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू लागि हो जान्न महत्वपूर्ण छ. तपाईं अपनाए गरिएको छ. तपाईं छोरा वा परमेश्वरको छोरी छन्.
मेरो छोरा मेरो छोरा हुँदा फाइदा धेरै हुन्छ. म उसलाई हेरविचार, उहाँलाई लागि प्रदान, र उहाँले खुवाउनुभयो गर्नुपर्छ निश्चित. ती नै विशेषाधिकार कुनै वरिपरि बच्चा प्रस्ताव छैन. तर तपाईं अपनाए गर्न सकिँदैन होइन.
सुसमाचारको संसारमा सबैभन्दा विशेष र समावेशी सन्देश हो. यी आशिष्हरू मात्र केही गर्न जाने, तर सबै उपलब्ध छन्. ख्रीष्टमा भरोसा. परमेश्वरले तपाईंलाई अपनाउने हुनेछ. उहाँले तपाईं र उसलाई मुख्य सम्बन्धको-पहिलो कमाएका कहिल्यै छौँ कुराहरू दिनुहुनेछ.
1. हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने के फरक यो बनाउँछ?
2. यदि म परमेश्वरको परिवारमा छु मतभेद कुन प्रकार मलाई वरिपरि मानिसहरू देख्नु पर्छ?
3. परमेश्वरको एक बच्चा रहेको बारेमा सबैभन्दा लागि कृतज्ञ के-के हुन्?
4. तपाईं पाप मुक्त गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई तपाईं यसलाई लड्न बाटो कसरी परिवर्तन गर्छ?
5. परमेश्वरको वचन येशूलाई जस्तै बनेर कस्तो भूमिका खेल्छन् गर्छ?
6. तपाईं हुनुपर्छ जस्तै तपाईं बढ्दै छैन भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?